के तपाईको हात- खुट्टामा माकुराको जालो जस्तै नसा देखिएको छ ? समाधान पढ्नुस, निको हुन्छ !! - Lekhapadhi.com श्वास्थ्य : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
के तपाईको हात- खुट्टामा माकुराको जालो जस्तै नसा देखिएको छ ? समाधान पढ्नुस, निको हुन्छ !!
लेखक : लेखापढी १६ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०९:१८ मा प्रकाशित
तपाईंले प्राय: देख्नु भएको होला कतिपय मानिसहरुको हात वा खुट्टाहरुमा माकुराको जालो जस्तै आकारको नीलो नसाहरु छालाको माथि देखिन्छ। कहिलेकाँहि यो खुट्टा वा खुट्टामा भन्दा माथि फिलामा बढी देखिन्छ, वा कहिले कुर्कुचोको छेउमा, यो नीलो नसा खुट्टा वा साप्रामा धेरै ठूलो हुन्छन्।
केही व्यक्तिहरूमा ठूलो आकारको नसाहरू पेटको एक तर्फ वा दुबैपट्टि देख्न सकिन्छ। यो छाती वा घाँटीमा, पाखुरा वा खुट्टाहरूमा वा साप्रा मा आउने गर्छ । यसलाई सामान्य सोचेर लापरवाही नगर्नुहोला र परामर्शका लागी निरन्तर गईराख्नुहोला।
छालामा देखिने यी अनौँठो नीलो नशाहरुले शरीर भित्रका विभिन्न रोगहरुलाई निम्त्याउँछ। त्यसकारण, शरीरको कुनै पनि भागमा निलो नशाहरू गम्भीरतासाथ लिनुहोस् र तुरुन्तै वैस्कुलर सर्जनसँग सल्लाह लिनुहोस्।
यी नसाहरू किन देखा पर्छन् त ?
यी फैलाउने नशाहरू शरीरको माथिल्लो सतहमा नशाहहरूको सञ्जाल हुन्, जुन सामान्य अवस्थामा शरीरको बाहिरी छालामा फैलिँदैन र शरीरको भित्र रहेको मोटो शिराको प्रणालीमा जोडिएको हुन्छ।
माथिल्लो सतहमा अवस्थित शिरा नेटवर्कले माथिल्लो सतहबाट अशुद्ध रगत रगर्दछ र यसलाई शरीरको गहिराईमा रहेको ठूलो नसहरूको प्रणालीमा पुर्‍याउँछ, जहाँबाट सबै अशुद्ध रगत सङ्कलन गर्दछ र शुद्धिकरणका लागि फोक्सोबाट हृदयसम्म पुग्दछ।
यदि, कुनै कारणवश, शरीरको भित्रपट्टि रहेको बाक्लो नशाहरूको प्रणाली अवरोध भयो भने, यसले बाहिरी सतहबाट आउने रगतलाई स्वीकार गर्न सक्षम हुँदैन, जसले गर्दा छाला भित्रिनुको सट्टा छालाको भित्री सतहमा रहन्छ, जसले अशुद्ध रगत भित्री सतहमा नै जम्मा पारेर राख्दिन्छ । जसले छालाको भित्री भागमा अशुद्ध रगत बढी जम्मा हुन्छ र निलो नशा गुचुमुचु जस्तो आकारको नशा उत्पन्न हुन्छ ।
नशा देखिनुको कारण:
यदि तपाईको हातको माथिल्लो भाग अथवा हातमा नीलो नशा अचानक देखिन्छ र समान हुन्छ भने यसको कारण यो हो कि हातहरुबाट अशुद्ध रगत संकलन गर्ने शिरा, रगतका शिराहरु स्थायी रुपमा शिरा वा घाँटी वा काँधमा जममा भएका छन् ।
यसको नजिक अवस्थित ट्यूमर वा क्यान्सरयुक्त ट्यूमरले त्यसमा दबाब दिन्छ। कहिलेकाँहि घाँटी वा काँधमाअवस्थित क्यान्सरयुक्त ट्यूमरको सुगन्धको समयमा, त्यहाँ नीलो शिरा सुनिनुको पनि सम्भावना हुन्छ।
नसा फैलिदै गएको देखिनु:
यसलाई सामान्य नठान्नुहोला यदि निलो रंगको नसाहरू तपाईंको फिलामा माकुराको जालहरू जस्तो झल्किरहेको देखा पर्दै छभने यसलाई भास्कुलर वा कार्डियो भास्कुलर सर्जनलाई देखाउनुहोस् र उनीहरूको सल्लाह लिनुहोस्।
यस्तो फैलिएको निलो शिराका लागि दुई कारणहरू छन् : एउटा कारण क्रोनिक शिरापरक शिशु अवस्था हो, जसमा शिरा भित्रका ढोकालाई कमजोर बनाउँछ।
सामान्य शिरामा स्थित नराम्रो अशुद्ध रगत एक दिशामा मात्रै तलमाथि गर्ने अनुमति दिन्छ । जसले खुट्टाको फिलामा अशुद्ध रगत ज्यादा जम्मा हुन नपाओस् ।
माथि चढेको रगत यदि तल झर्छ भने यिनीहरु एकआपसमा बन्द हुन्छन् । जसले गर्दा रगत तल आउन पाउँदैन । जब यो बन्द कुनै कारणले हुन्छ या यसको संरचनामा गहिरो गम्भीर परिवर्तन हुनछ भने माथि जानेवाला रगत थोरै या धेरै मात्राको अशुद्ध रगतले गुँडाको खोप्रोमा असर गर्दछ ।
यसैले गर्दा रगत राम्रोसँग सञ्चालन नभई माथि तल गर्दछ । यो फर्केर आउने कम्रमा निरन्तर दोहोरिनुको कारण अशुद्ध रगत छालाको भित्री भागको नशामा जम्मा हुन्छ जसले गर्दा छालामा गुचुमुचु आकारको नशा एकै ठाउँमा जोडिएको हामीले देखेका नै छौँ ।
नियमित व्यायाम को अभावले खुट्टाको हातको गोलीगाँठो कमजोर हुन्छ जसले मानिस आफ्नो काम सजीलै गर्न असमर्थ हुन्छन्। केही समयका लागि शिरामा रगत जम्मा हुने हुँदा छालाको संरचनामा परिवर्तन आंशिक रूपमा नष्ट हुन्छ, जसको कारण अशुद्ध रगत माथि तल आउँछ। बल्जङ् शिरा मुनि देखा पर्दछ।
एप्पल साइडर भिनेगर:
एप्पल साइडर भिनेगर ( Apple Cider Vinegar) धेरै लाभदायक हुन सक्छ । एप्पल साइडर भिनेगरसँग हल्का मालिश गर्नुपर्दछ र दिनमा दुई चम्चा दुई दिन लिनु पर्छ र पानीमा खानुपर्छ। एसिडिटी बिरामीहरूले एप्पल साइडर भिनेगर प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि आवश्यक छ भने, त्यस सँगै एसिडिटीको औषधीहरू लिनुहोस् ।
मूलाको रसमा पीठो भिजाएर रोटी बनाउनुहोस् र रोटी बाक्लो बनाउनुहोस्। त्यसपछि त्यो रोटी र मूलाको रस लिनुहोस् र र त्यस रोटीलाई मसिनो पिठो जस्तै बनाउनुहोस् र यसलाई भेरिकोज भानामा लगाउनुहोस् र रातभर कपडामा बाँध्नुहोस् र बिहान त्यस बाधेँको कपडालार्य निकाल्नुहोस्।
लगातार १ महिनासम्म यो काम गर्नुहोस्, तपाईको यो समस्या हटेर जानेछ । यदि तपाइँलाई हल्का चिलाउँछ भने, बुझ्नुहोस् कि तपाइँको रोग निको भइरहेको छ, तर चिलाउनु वा कन्याउनु हँदैन ।
जान्नुहोस्, डेंगूका लामखुट्ट्रे सबै भन्दा भिन्न किन हुन्छन र टाेकेकाे कति दिन पछि थाहा हुन्छ ?
रक्तचाप (Blood pressure) बारे पाँच गलत धारणा, थाहा पाउनुहोस नत्र खतरा !
महिलाले नियमीत केरा खाँदा छोरा जन्मिन्छ: अक्स्फोर्ड बिश्वविद्यालयको एक अध्ययन
आँपको बोक्राको चमत्कार, अनुहारको चाउरी एबं डण्डीफोर हटाउछ !!
नियमित ताली बजाउनु स्वास्थ्यका लागि धेरै फाईदै फाईदा
पत्थरी हुनवाट जोगीन खानपिन, नियमित ब्यायाम संगै अपनाउनुस घरेलु उपायहरु